आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने ६ सु’त्र, के भन्छ अ’ध्ययन ? – Halkhabar kura
२९ भाद्र २०७७, सोमबार १०:५३
आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने ६ सु’त्र, के भन्छ अ’ध्ययन ?
के तपाई पत्याउनुहुन्छ ? आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने सुत्र के हो भनेर । पुरुषमा एक्स, र वाइ तथा महिलामा एक्स एक्स क्रोमोजोम हुन्छ । यौ’न सम्पर्कको समयमा पुरुषको वाइ क्रो’मोजोम र स्त्रीको एक्स क्रोमोजोमको मिलन भएमा छोरा र पुरुषको एक्स क्रोमोजोम र महिलाको एक्स क्रोमो*जोमको मिलन भएमा छोरी जन्मने गर्दछ ।
कुनै पनि स्त्री प’रिपक्क भएपछि र’जस्वला चक्र सुरु हुने गदर्छ भने यो चक्र साधारण तया १२–१४ वर्ष देखि सुरु भएर ५०-५५ वर्ष भित्र ब’न्द हुने गदर्छ । स्त्रीमा रज’स्वला चक्र २८ दिनको हुने गदर्छ । कसैकसैमा भने केही दिन अघि र केहीदिन पछि पनि हुन सक्छ । प्रत्येक २८ दिनमा र’जस्वला हुने स्त्रीमा करिव १४ औं दिनमा डिम्व नि’स्काषन हुने गदर्छ र २४ औं दिनसम्म रहन्छ । यो अवधिमा स्त्री र पुरुष विच यौनसम्र्प*क हुन गएमा गर्भ रहन्छ ।
तपाईलाई छोरा ज’न्माउने चाहना छ भने तपाईले वाइ क्रोमोजोमयुक्त शु’क्रकीटलाई स’क्रिय वनाउनु पर्ने हुन्छ भने छोरीको चाहना हुनेले एक्स क्रोमोजोमलाई स’क्रिय वनाउनु पर्ने हुन्छ । यसका साथै स्त्रीको यौनाङ्गमा अ’म्लीयपना र क्षा’रीयपना मिलाउनु पदर्छ यौनाङ्गमा भएको अ’म्लीयपनाले छोरी जन्माउन एक्स क्रोमोजोमयुक्त शु’क्रकीटलाई स’क्रिय बनाउन सहयोग पुग्दछ ।
चिनियाँ बै’ज्ञानिकहरुले लामो समय र अ’नुसंधानपछि पत्ता लगाईएको यो प्रविधि ९९.९ प्रतिशत सफल भएको छ । तपाई पनि ढुक्कका साथ यो प्रविधि अ’पनाउनुहोस् । इच्छा र चाहाना तपाईको छोरा या छोरी पाउने जिम्मा श्रीमतिको । शुरुमा, चाइ’नीज विशेषज्ञद्धारा आ’विष्कार गरिएको यो प्रविधिमा धेरैले शंका गरेका थिए ।
चा’इनिज लुनार क्या’लीन्डरको अध्ययनले देखाए अनुसार , आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने सुत्र यस्ता छन्
पहिलो : यदि तपाई छोरा जन्माउन चाहनु हुन्छ भने स्त्री रजस्वला भएको दिन देखि अण्ड उत्पादन हुने दिनसम्म स’हवास गर्नु हुदैंन । यसो गर्दा पुरुषमा वाइ क्रोमोजोमयुक्त शुक्रकीटको बृ’द्धि हुनुका साथै महिलाको यो’नाङ्गमा क्षारीयपना आउन मद्दत गर्दछ जस्का कारण छोरा जन्मन्छ ।
दोश्रो : स्त्रीको यो‘नी नजिकै अम्लीय वातावरण बढि हुने गदर्छ स’हवास गर्दा वी‘र्यलाई योनी’नजिकै छाडिदिने हो भने छोरी जन्मन्छ । यदि स’हवास गर्दा लिङ्गलाई एकदम भित्र छिराएर सवै वीर्य भित्रै स्ख*लन गराउने हो भने छोरा जन्मन्छ किनभने पा’ठयघरको मुख नजिकै क्षा’रीय वातावरण बढि हुन्छ यसले गर्दा वाइ क्रो’मोजोमयुक्त शुक्रकिट सक्रिय हुन्छ ।
तेश्रो : महिलाको प्रत्येक दिनको ता’पक्रम तीन चार महिना सम्म मापन गर्ने अघिपछि भन्दा बढि ता’पक्रम भएको दिन स’हवास गर्दा वाइ शु’क्रकीट सक्रिय हुन्छ र छोरा जन्मीन्छन् ।
चौथो : क’सिला कपडा लगाउने पुरुषहरुको वाइ क्रोमोजम युक्त शुक्रकीट न’ष्ट हुन्छ र छोरी जन्मीन्छ ।
पाँचौ : छोरी जन्माउन चाहनु हुन्छ भने गर्भ रहनु भन्दा तीन चार महिना अघि देखिनै क्या’लसीयम र म्या’ग्नेसियम युक्त खानेकुरा खानु पर्छ भने छोरा जन्माउन चाहनेले पो’टासियम र सोडिएम युक्त खानेकुरा खानु पर्छ ।
छैठौ : चाइनिज लुनार क्यालीन्डर अनुसार कुनै महिला १८ वर्षको उमेर जनावरी महिनामा ग’र्भवती भएमा छोरी र डिसेम्वरमा गर्भवती भएमा छोरा हुन्छ ।
**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
Previous अहिलेसम्मकै धेरै तीन लाख ७ हजार भन्दा बढी संक्रमित विश्वमा एकै दिन थपिए, मृतक कति ?